Kachin Duwa: သက်တန့်ရောင်လမ်းစဉ်
ခရစ်ယာန်ကျမ်းစာ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ လူသားတွေ ဆုိုးသွမ်းမှု များလွန်းတာကြောင့် ကမ္ဘာကြီးကုို တခါ ဆေးကြောခဲ့တယ်။ တကမ္ဘာလုံး ရေလွမ်းလုို့ လူအများအပြား သေကြေခဲ့ရတယ်။ (ဒီကာလ ကုို သိပ္ဗံပညာရှင်တွေက ဒုိုင်နုိုဆော များ မျိုးသုန်းခဲ့တုန်းက အဖြစ်အပျက် နဲု့ခုိုင်းနှိုင်းကြပါတယ်။) ဘုရားစကား ကုို လုိုက်နာတဲ့ နောဧ ဆုိုတဲ့ မိသားစုကျန်ခဲ့တယ်။ သူတုို့ မိသားစု ကတော့ ဘုရားရဲ့ အကြံအစည်ကုို ယုံကြည်ပြီး ကြိုတင်ပြီး လှေသင်္ဘောကြီး တည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ သူတုို့ မိသားစု ကုို နောက်ဆုံး ဘုရားသခင် ပြခဲ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး နိမိတ် လက္ခဏာ ကတော့ သက်တန့်ရောင် ပါပဲ။
သက်တန့်ရောင် တည်နေသ၍ ဘယ်သောအခါမှ ဒီလုို ဘေးဆုိုးနဲ့ တရားမစီရင်တော့ပါ။ ဆုိုသတဲ့။
သက်တန့်ရောင်လုို အရောင်အတွေးစုံနေခြင်း ကုို လက်ခံတဲ့ လူ့လောကဟာ ငြိမ်းချမ်းခြင်း ရှိမယ် ဆုိုတဲ့ သဘောပါ။
အဲဒီ အုိုင်ဒီယာ ကုို Unity in Diversity လုို့ ပညာရှင်တွေက ခေါ်ကြပါတယ်။
သက်တန့်ရောင်ဟာ တစ်ရောင် နဲ့ တစ်ရောင် နှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးခြင်း အလျဉ်းမရှိ သလုို၊ တစ်ရောင်က အခြား တစ်ရောင်အပေါ် လွမ်းမုိုး အုပ်စုိုးခြင်းလဲ မရှိပါ။ ညီမျှနေတဲ့ အရောင်အသွေး ပင်လျှင် သက်တန့်ရဲ့ လှပခြင်း သဘောတရား ကို ဖေါ်ဆောင် ပါတယ်။
ဒီနေ့ အရောင်အသွေးစုံတဲ့ ကမ္ဘာမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ပြဿနာ အများပုိုင်းဟာ တစ်ရောင်ရောင်က အခြားတစ်ရောင် အပေါ် လွမ်းမုိုးဖုို့ ကြိုးစားခြင်းရဲ့ ရလဒ်တွေပါပဲ။
အဲဒါကြောင့် ပဠိပက္ခ ဖြစ်နေတဲ့နုိုင်ငံတုိုင်းရဲ့ မူရင်း ပြဿနာကုို သုံးသပ်လုိုက်တုိုင်း တစ်ရောင်တည်းချေချင်သူများရဲ့ လွမ်းမုိုးခြင်း ကုို ခံရတတ် ပါတယ်။
အကျိုးဆက် အနေနဲ့ ရောင်စုံ လက်ခံတဲ့ နုိုင်ငံတွေဆီ လူသားအရင်းအမြစ်များ အလျိုလျို စီးဆင်းသွား ပါတော့တယ်။ ဒီတော့ ဆင်းရဲခြင်း၊ ဦးနှောက်ယုိုစီးခြင်း ဆုိုတဲ့ ရလဒ်ကျန်ခဲ့တယ်။
ငြိမ်းချမ်းခြင်းရဲ့ ရလဒ် ကုို အမှန်တကယ် ဖေါ်ဆောင်မယ် ဆုိုရင် အရောင်အသွေး စုံလင်ခြင်း ကုို လက်ခံ ရမယ်။
ပန်းခြံမှာ တောင် ပန်းတွေရဲ့ အရောင် စုံစုံလင်လင် ရှိမှ လူတွေက သိပ်လှတယ် လုို့ ပြော ကြတယ်။ တစ်ရောင်ထဲ ရှိနေတဲ့ ပန်းခြံကုို ဘယ်သူမှ သွားချင်မှာ မဟုတ်။ ခဏတဖြုတ် ရာသီပွင့်လုို့ သွားချင်ရင် သွားမယ်။ အမြဲတမ်းအတွက်တော့ လှပခြင်း ဆုိုတဲ့ ဂုဏ်အင်္ဂါ မထိမ်းထားနုိုင်ပါ။
အမြဲတမ်းအတွက် လှပ ခြင်း ဆုိုတာ အရောင်စုံတဲ့ ပန်းခြံ ပါ။
ဒါကြောင့် ငြိမ်းချမ်းခြင်း ဆုိုတဲ့ လှပခြင်းတရားဟာလဲ အရောင်စုံ လက်ခံတဲ့ လောက မှာ အမှန်တကယ် ရှိတယ် ဆုိုတာ ယုံပါ။
Brang Wunpawng February 15, 2014 at 5:50 PM
Du Wa e, sa chyai kau da sai yaw. Du Wa na post ni yawng grai hkrak ai. Byin mai yang blog http://atsammarai.blogspot.com
de ma sa chyai rit yaw.